अमेजनको निःशुल्क गिफ्टको नाममा 'स्क्याम' म्यासेज फैलिँदै, जोगिन के गर्ने ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
बुधबार, जेष्ठ २६, २०७८ १४:५८
काठमाडौं । केही महिनादेखि अमेजनको ३०औं वार्षिकोत्सवमा नि:शुल्क उपहार दिनेभन्दै ‘स्क्याम’ म्यासेज सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेकाे छ । नेपालमा पनि फेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ता यस्ताे स्क्यामबाट पीडित भएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार : फोनमा स्प्याम म्यासेज आयो ? सुरक्षित हुन यसो गर्नुहोस्